Tsvaga zvekuona muguta reRiga muLatvia | Kufamba Nhau
Susana Garcia | | General, Chii chekuona
Riga ndiro guta guru reLatvia uye guta rayo gurusa, kuve nhasi yetsika uye bhizinesi nzvimbo. Iri zvakare iguta rakakura kwazvo muBaltic States uye rakatarisana neGungwa reBaltic. Rwizi rweDaugava runoyambuka rwakave nzira huru yekutengeserana kubvira pamberi peMiddle Ages, izvo zvakatungamira mukuvandudzwa kweguta.
Ngatione kuti ndedzipi nzvimbo dzekufarira iyo Riga guta muLatvia, ine taundi rekare iro rakaziviswa seNyika Heritage Nzvimbo. Tinogona kunakidzwa nezvivakwa zvayo, dzimba dzeumhizha nyowani uye zvivakwa zvekare zvine mamiriro ekuchengetedza.
1 About Riga
2 Chii chekuona muRiga
2.1 Monument kune rusununguko
2.2 Guta Horo Square
2.3 Riga Central Musika
2.5 Chechi yaSt
2.6 Vakoma vatatu
2.7 Livu Square
2.8 Masvingo ekare eRiga
Iri guta ndiro guta guru reLatvia, riri iro guta rakakura kwazvo muBaltic States. Iyo iri muGulf yeRiga, pamuromo peRwizi Duvaga. Iri guta chikamu cheMubatanidzwa weBaltic Cities. Iyo yakakamurwa kuita matunhu matanhatu ayo anova akaparadzaniswa kuita 58 nharaunda dzakasiyana. Iyo yakavambwa muzana ramakore rechiXNUMX, kunyangwe yaive nzvimbo yekutengesa kubva kunyangwe yapfuura.
Chii chekuona muRiga
Kana iwe uchizoenda kuguta reRiga, iwe uchafanirwa kuita a diki runyorwa rwezvinhu zvese, asiri mashoma. Zvinotora mazuva mashoma kuti ushanyire guta rese.
Monument kune rusununguko
Mukati meBastejkalns Park mune Rusununguko Monument. Chikomo cheBastion ipaki yakanaka yakayambuka nemugwagwa unogona kufambiswa nechikepe. Pakati pepaki iwe unogona kuona hombe makumi mana emakumi marefu obelisk, yakavakwa muna 1935. Iyi shongwe inomiririra rusununguko rweRepublic yeLatvia uye zvakare chiyeuchidzo chinopa mutero kune avo vakadonha munguva yeHondo Yerusununguko. Iko kushanya kwakakosha kuri zvakare munzvimbo dzakanaka.
Guta Horo Square
Plaza del Ayuntamiento ndiyo nzvimbo yepakati-kati mukati meguta rese, hombe esplanade iyo inogara iine mweya wakanaka. Muchivara ichi pane zvivakwa zvekare zvakawanda zverunako rukuru, pakati pazvo iyo Imba yeBlackheads. Kuvakwa kwaro kwekutanga kwaive kubva muzana ramakore regumi nemana uye rakagadzirirwa kuitisa mhemberero dzeveruzhinji kana dzimba dzimba dzepamutemo. Hondo Yenyika Yechipiri yakaparadza chikamu cheguta uye zvakare chivakwa ichi. Yakavakwazve muna 1999 uye parizvino inogara Hofisi yeVashanyi, ichiita kushanya kukuru kuti uzive nezve zvese zvatingaone muguta.
Riga Central Musika
Uyu musika wepakati ndeimwe yeakakura uye anoshamisa kwazvo anogona kushanyirwa. Inowanikwa mune yekare zeppelin hangars ayo akashandiswa muHondo Yenyika Yekutanga. Ivo vane 72.000 mativi emamita umo zvinodikanwa zvakakosha uye zvakajairwa chikafu chinotengeswa. Iyo inzvimbo yakanaka yekunakirwa nekufamba kuburikidza neyakajairika nzvimbo mauri kuti uone mamiriro eguta.
Zvizhinji zvezvinhu zvechedhedral iyi zvinobva muzana ramakore rechiXNUMX, asi chimiro chainacho nhasi ndizvo zviri mugumisiro weiyo kuvakazve muzana ramakumi maviri. Iyo ine yemukati yakapusa uye yakanaka cloister, hombe nhengo uye mamwe akasviba magirazi mahwindo. Kunyangwe isiri imwe yemakereke makuru anoshamisa aunogona kushanyira, iri zvakare nzvimbo yekufarira.
Kereke iyi iri padyo nePaza del Ayuntamiento uye inzvimbo inokwezva kutarisana kwayo. Chechi yakadzorerwa zvakare mukati mezana ramakore rechimakumi maviri, senge rakawanda reguta. Iyo bhero shongwe ndiyo inzvimbo yakakwana yekuona guta kubva kumusoro. mabvazuva bhero shongwe inoyera mamita makumi manomwe, kunyangwe nzvimbo yepamusoro iri iyo Terevhizheni Shongwe.
Iri zita risinganzwisisike rinogamuchirwa nevose vatatu zvivakwa zviri mumugwagwa weMaza Pils, panhamba 17, 19 uye 21. Idzo dzimba nhatu dzakabatana mukati, kunyangwe dzichibva kunguva dzakasiyana uye kuoneka kwadzo kwakasiyana kwazvo, nenhamba 17 iri ndiyo dangwe pane matatu.
Iyi mraba ndeimwe ye liveliest nzvimbo muRiga yese. Iyo inzvimbo yakakwana yekunakirwa mumaresitorendi, mabara uye mamiriro eguta. Muchivara ichi mune zvekare zvimwe zvivakwa zvinonakidza seImba yeKati mune art new style.
Masvingo ekare eRiga
ari Riga masvingo eguta aive kubva muzana ramakore rechiXNUMX asi nhasi pane zvishoma zvasara. PaTroksnu Street unogona kuona Gedhi reSweden, iri iro chete gedhi reguta rinosara rakamira. Pedyo nemusuwo uyu pane mamwe mabharaki ekare emauto akashandurwa kuita maresitorendi nemabhawa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Zvokuona muRiga, Latvia
Zvokuona muNorth Ireland